जाडोमा के लाउँछन् शीर्षनेता ? :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
जाडोमा के लाउँछन् शीर्षनेता ?कोट सबैका साझा, अरुमा आफूखुशी १४ पुस, काठमाडौं । पहिले-पहिले बिहान झिसमिसेमै बैठक र छलफलका लागि निस्कने शीर्षनेताहरु हिजोआज घाम पारिलो नहुँदासम्म हत्पति घरबाहिर निस्कँदैनन् । अरुलाई जस्तै नेताहरुलाई पनि चिसो र जाडो हुन्छ । घाम नलाग्दासम्म सिरकभित्रै बस्ने र खाना खाएपछि घाममा टहलिने उनीहरुको दिनचर्या बनेको छ ।
तर, सधैं घरभित्र सिरकमा र बाहिर घाम तथा हिटरमा बसेर मात्र सुख पाईंदैन । अरुले जस्तो कष्ट व्यहोर्नु नपरे पनि शीर्ष नेताहरुलाई जाडोमा समेत यताउता डुलिरहन्छन् । कहिले शितल निवास तथा कहिले अरु नेताहरुको घरदैलो । हिँडडूल र भेटवार्ता भैरहन्छ । त्यसैले सार्वजनिक ठाउँमा ओहोरदोहोर गर्दा शीर्ष नेताहरु अरुले जस्तै बाक्लो लुगा लगाउँछन् । तर, यस्तो लुगा लगाउँदा कतिले ‘च्वाइस’ मा ध्यान दिन्छन् त कतिले उतिसारो मतलव राख्दैनन् ।
कसले के लाउँछन् ?
शीर्ष नेताहरुमध्ये एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल लवाइ-खवाइमा अलि बढी ध्यान दिनुहुन्छ । जता जाँदा पनि चिटिक्क परेर निस्कने उहाँको पहिलेदेखिकै बानी हो । जाडोमा समेत उहाँले शरीरलाई सुहाए/नसुहाएको ख्याल गरेर मात्र लुगा लगाउनुहुन्छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा खनालले प्रायः एउटा पहिरन छुटाउनुहुन्न । त्यहो हो-कालो रंगको हाइनेक । भादगाउँले टोपी त लगाउनुहुन्छ नै । जाडोमा उहाँले कालो हाइनेक प्रायः छुटाउनुहुन्न ।
जाडोमा उहाँको गलामा रातो रंगको गलबन्दी पनि देखिन्छ । ज्याकेटभन्दा ऊनीको कोट उहाँले बढी लगाउनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ स्वीटर र ज्याकेट लगाएर पनि उहाँ बाहिरफेर हिँड्नुहुन्छ । घुँडासम्म आउने ओभरकोटमा पनि उहाँलाई बेलाबेला देख्न सकिन्छ । कोट, ज्याकेट, स्वीटर जे लगाए पनि खनालले नेपालको नक्सा भएको लोगो राख्न कहिल्यै भुल्नुहुन्न । घरमा बस्दा चाहिँ खनालले ट्रयाकसुट लगाउने गर्नुहुन्छ । आफूलाई चाहिने लुगा किन्न बेलाबेला उहाँ आफैं पनि पसलमा पुग्नुहुन्छ ।
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कपालमा जस्तो पोशाकमा ध्यान दिनुहुन्न । घरमा जस्तो भेट्यो, त्यही लगाएर हिँड्नुहुन्छ ।
प्रायः पत्नी सीता र सहयोगीले पोशाक कुन लगाउने भनेर सल्लाह दिन्छन् । जाडोमा उहाँ प्रायः ज्याकेट लगाएर बाहिरफेर निस्कनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ स्वीटर र कोट पनि लगाउनुहुन्छ । प्रचण्डले बेलबेला गलबन्दी र टाउको गम्लङ्ग ढाक्ने ऊनीको टोपी पनि लगाउनुहुन्छ । घरमा बस्दा खनालले जस्तै उहाँले पनि ट्रयाकसुट लगाउनुहुन्छ । प्रचण्ड अलि बढी फूलबुट्टे टीसर्टमा पनि देखिनु हुन्छ ।
प्रचण्डलाई प्रायः उहाँका सहयोगीले लुगा ल्याइदिन्छन् । भतिजा समीर दाहालले लगाउने लुगा उहाँलाई पनि ठीक हुन्छ ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला जाडोमा ज्याकेट भन्दा कोट र स्वीटर बढी लगाउने गर्नुहुन्छ । हरियो रंगको गलबन्दी प्रायः उहाँले छुटाउनुहुन्न । कोइरालाले बेलाबेला कान ढाक्नेगरी ऊनीको टोपी पनि लगाउनुहुन्छ ।
खनाल र प्रचण्डले जस्तो कोइरालालाई चिटिक्क पारेर लुगा लगाउन आउँदैन । उहाँजस्तै लुगामा त्यति ध्यान नदिने नेतामा पर्नुहुन्छ, नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण । धेरैजसो ज्याकेट लगाउनुहुन्छ । गलामा गलबन्दी छुट्दैन । ऊनीको टोपी पनि लगाउनुहुन्छ । ज्याकेटकोभित्र जीउ तताउने थर्मोकोट पनि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कालो रंगको हाइनेक प्रायः छुटाउनुहुन्न । धेरैजसो उहाँ कोट नै लगाउनुहुन्छ । बेलाबेला गलामा गलबन्दी पनि भिर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएकाले मात्रै पनि होइन, भट्टराई पहिलेदेखि नै लुगा चिटिक्क लगाएर हिँड्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ ।
एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल धेरैजसो ज्याकेट लगाउनुहुन्छ । खैरो रंगको कोट र गलबन्दी पनि बेलाबेला लगाउनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री एवं मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदार धेरैजसो कोट लगाउनुहुन्छ । उहाँले पनि गलबन्दी प्रायः छुटाउनुहुन्न । बेलाबेला ऊनीको टोपी पनि लगाउनुहुन्छ ।
28 Comments on “जाडोमा के लाउँछन् शीर्षनेता ?”
bibek pandey wrote on 29 December, 2012, 3:39
यी दुइ कौडीका नेताहरुलाई लंगौटि मात्र लगउन दिएर काठमाडौँ को जाडोमा लखेट्नु पर्छ .
Well-loved. Like or Dislike: 95 0[जवाफ फर्काउनुहोस्]Rajan Reply: December 29th, 2012 at 7:47 amEak dam sahi…
Like or Dislike: 13 1[जवाफ फर्काउनुहोस्]इश्वरी लम्साल Reply: January 3rd, 2013 at 10:44 pmbibek ji ko comment sarai thik chha. nepalka aileka sabai neta harulai bibek ji le bhanejastai garnu parne ho
Like or Dislike:40[जवाफ फर्काउनुहोस्]raju sapkota Reply: January 5th, 2013 at 7:06 amTjik ho sirenetalai yo chisoma chiso panima dubaodia balla buddi aauxa
roshan wrote on 29 December, 2012, 4:36
yesto new pani chhapne ho netale k lauchhan netale k khanchan
j sukai khos sale janta mara netale
प्रेम तामांग wrote on 29 December, 2012, 5:04
laxman wrote on 29 December, 2012, 5:33
sampadak mahodaya yasto samachar chapnu ko udesya k ho yo?patrikako pana varne k hi paunu vayana tapaile?
Naviin chhetri wrote on 29 December, 2012, 6:05
J sukai laun khate netaharule
bijaya khanal wrote on 29 December, 2012, 7:22
laaj nabhaka neta haru ko luga ko charcha, beijeti haru ko k kura, desh lai nango banaera afule ijjat dhakne?
Devendra Ghimire wrote on 29 December, 2012, 7:37
ab gadhaa ko chhaala ko lugaa lagaaedinu par6 all nepali haru miler sabai chutiya netaa haru lai…
puniya prasad cg wrote on 29 December, 2012, 7:40
JADO MA TA ENI HARU LAI NANGAI MEETING GARNY PARISTITG JANTA LE BANAUNU PARXA ANI HUNXA KI TA SAHAMATI
SHREE SAPKOTA wrote on 29 December, 2012, 7:53
काम नपाएको बुहारी पाडोको नाइटो कन्या, यी पत्र कार हरुले समाचार बनाउने कुरा केही नपायेसी के गरू न , बिचरा !!!!!!!!
sudip regmi wrote on 29 December, 2012, 8:17
yo ta kapadako kura vayo jadoma ta netaharu le daru agau6n hola ?? hoin vane ta sahamati hunthyo hola ni .
Like or Dislike: 1 0[जवाफ फर्काउनुहोस्]sudip regmi Reply: December 29th, 2012 at 8:18 amho ho daru lagau6n
RB Baniya wrote on 29 December, 2012, 8:29
पत्रकार मित्र अरु कुनै समाचार मिलेन ? आखिर हामी जनतालाई के चासो त यो हाम्रो देशका सोसकहरुले जे लगायपनी —-:-)
sukhad wrote on 29 December, 2012, 8:38
political leader ko birudhha maa ek abhiyaan GO TO FACEBOOK AND LIKE THE PAGE: ” SAVE NEPAL FROM POLITICAL LEADER”
namkhen lama wrote on 29 December, 2012, 9:33
sala chor haru je laya lau ramro lau masti ghara
paban wrote on 29 December, 2012, 9:45
desh lutera haru sit paisa6dai6 k vor
deepak khadka wrote on 29 December, 2012, 10:02
dui kaudika netako posakma k ko mahato ?
rabin shrestha ksa wrote on 29 December, 2012, 18:33
rb baniya je ko kamet man paryo
top online shopping sites wrote on 30 December, 2012, 5:11
eakchoti hamro deshko rajniti garne udhag banda bho bhane k gari kahn6an hola hamra neta haru bechara…
Bhim lamichhane wrote on 30 December, 2012, 8:28
Kangres,uml ko netaharulai chahi nanggai banayara ktm ko vally ghumaunu parne.ani sahamati ma authyo ki.
Like or Dislike: 1 0[जवाफ फर्काउनुहोस्]R.sharma Reply: December 30th, 2012 at 3:39 pmके ए.नेकपा माओबादी चाही ठिक १७००० मान्छेको रगत खाएको यस्तै गर्न हो ?
Maha Prasad Paudel wrote on3January, 2013, 1:06
aba kun kun netale kati bela khanchhan, kati baje aachi garchhan tyo pani chhapne ho ki patrikama ? aru kehi chhapne kura chhaina hola.
sere wrote on3January, 2013, 6:29
PENTY CHAI KASTOOO LAGAU CHHAN NI HAMOOO DESH KO NETA HARLE KI LAGAUDAINAN ?
Rajiv Neupane wrote on3January, 2013, 16:02
neta le k khanchhan, kasto aachi garchhan bhanera pani chhapne ho ki………
इश्वरी लम्साल wrote on3January, 2013, 22:56
अब नेपाली समाचार पत्रहरुमा नेपाल का नेताहरुले टोइलेटमा कुन टोइलेट पेपर प्रयोग गर्छन , पानी ले धुन्छन कि धुदैनन्, कसले धुन्छन कसले धुदैनन् भनेर पनी छापिए भने त्यसलाई अचम्म मान्नु नपर्ने भएको छ l
shailesh kc dahal wrote on6January, 2013, 5:29
J LAYA NI IZZAT BHAY PO SUNGUR HARUKO. FROM SAUDI ARAB